किन एक CRM प्रयोग? ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धनका फाइदाहरू
सीआरएम भनेको के हो? एउटा प्रयोग गरेर के फाइदा हुन्छ?
सोमबार, फेब्रुअरी 14, 2022 सोमबार, फेब्रुअरी 14, 2022 Douglas Karr
मैले आफ्नो क्यारियरमा केही महान सीआरएम कार्यान्वयनहरू देखेको छु ... र केहि पूर्ण रूपमा डरलाग्दो। कुनै पनि टेक्नोलोजी जस्तै, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाइँको टीम छ यसमा काम गर्न कम समय र अधिक समय यसको साथ मूल्य प्रदान गर्न एक महान CRM कार्यान्वयनको कुञ्जी हो। मैले नराम्रो रूपमा लागू गरिएको सीआरएम प्रणालीहरू देखेको छु कि बिक्री टोलीहरू स्थिर ... र प्रयोग नगरिएका सीआरएमहरू कि नक्कल प्रयास र भ्रमित कर्मचारी।
सीआरएम भनेको के हो?
जबकि हामी सबै सफ्टवेयर कल गर्छौं कि ग्राहक जानकारी एक सीआरएम भण्डारण गर्दछ ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रक्रिया र रणनीतिहरूको साथै टेक्नोलोजी समावेश गर्दछ। CRM प्रणाली रेकर्ड, व्यवस्थापन, र ग्राहकको जीवन भर मा ग्राहक अन्तरक्रिया विश्लेषणको लागि प्रयोग गरीन्छ। बिक्री र मार्केटिंग सम्बन्ध सुधार गर्न को लागी यस डेटा को उपयोग र अन्ततः, ग्राहकको मूल्य धारणा र अतिरिक्त बिक्री को माध्यम बाट।
यहाँ भर्खरको सीआरएम उद्योग तथ्या .्कहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्
सीआरएम प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ?
के तपाईंसँग बिक्री टोली छ जुन उनीहरूको आफ्नै सम्भावित डाटाबेसलाई व्यवस्थापन गर्दछ? खाता व्यवस्थापन र सेवा प्रतिनिधिहरू जुन प्रत्येक ग्राहकको बारेमा आफ्नै नोटहरू प्रबन्ध गर्छन्? तपाईंको कम्पनी बढ्दै जाँदा, तपाईंको मान्छे फर्कन्छ, र अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले संभावनाहरू र ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्नु पर्छ ... तपाईं यसलाई कसरी ट्र्याक गर्नुहुन्छ?
बिक्री, समर्थन, र मार्केटिंगको साथ ग्राहक टचपोइन्टको बीचमा केन्द्रीय प्रणाली प्रयोग गरेर, एकत्रित डाटा संगठन र अन्य प्लेटफर्महरूमा पहुँचयोग्य डेटाबेसको लागि अधिक उपयोगी हुन्छ। यहाँ दश तरिकाहरू छन् जुन संगठनहरूले आफ्नो सीआरएम लगानीमा आज कलमा राम्रो फिर्ती देखिरहेका छन्।
रिपोर्ट मार्केटिंग, बिक्री, र प्रतिधारण वास्तविक समयमा केन्द्रित छ र यात्रा र बिक्री पाइपलाइन खरीद मा आधारित भविष्यवाणी पनि गर्न सकिन्छ।
एकीकरण अन्य मार्केटिंग ऑटोमेसन प्लेटफर्महरूमा, लेखा प्लेटफार्महरू, ग्राहक डेटा प्लेटफर्महरू, र प्रणालीहरूको अधिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ।
स्वचालन दुबै प्रयास र समस्यालाई कम गर्न सक्छ म्यानुअल पुशिंग र प्रणालीबाट प्रणालीमा लगत तान्नका कारण।
प्रक्रियाहरू कुञ्जी ट्रिगरहरू सेट अप भएका र ग्राहकहरूलाई टच गर्नु आवश्यक भएमा उचित कार्मिकहरूलाई सूचित गरिन्छ जहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
पालनपोषण गर्दै अभियानहरू बिक्री फनेल मार्फत खरीददारहरूलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्न सकिन्छ।
ग्राहक सन्तुष्टि र धारणा बढ्न सक्दछ किनकि कम ग्राहकको रूपमा प्रत्येक ग्राहकको 360 XNUMX०-डिग्री दृश्य सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक हुन्छ।
बिक्री टोलीहरू निगरानी गर्न सकिन्छ र उनीहरूको प्रदर्शनको गति बढाउन कोच गर्न सकिन्छ। बिक्रीबाट प्रतिक्रियालाई मार्केटिंगको लागि समग्र गर्न सकिन्छ उनीहरूको सामग्री र विज्ञापन रणनीतिहरूको गुणस्तर र लक्षित गर्न।
मार्केटिङ अभियानहरू उनीहरूको प्रदर्शनको लागि अनुगमन गर्न सकिन्छ र अधिक सटीक डाटाको आधारमा विभाजन र निजीकरणको उपयोग गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्राहकहरूलाई रूपान्तरणको रूपमा, अभियानहरू उचित रूपमा बिक्रीको लागि श्रेय दिन सकिन्छ, प्रत्येक रणनीतिको प्रभावमा थप खुफिया जानकारी प्रदान गर्दछ।
अवसर प्रणालीलाई क्रस-सेल, अपसेल, र ग्राहकहरु लाई कायम राख्न पूर्ण रूपले उपयोग भएकोले पहिचान र कार्य गर्न सक्दछ।
ज्ञान प्रत्येक ग्राहकको बारे भण्डार गरिएको छ कि व्यक्ति र प्रक्रियाहरू मा परिवर्तन ग्राहकको अनुभव बाध्न छैन।
यदि तपाईंको खाता प्रबन्धकहरू, ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरू, र बिक्री प्रतिनिधिहरू तपाईंको सीआरएममा एक ग्राहकको साथ प्रत्येक अन्तरक्रिया सटीक रेकर्ड गर्दै छन् भने, तपाईंको व्यवसायमा डाटाको अमूल्य भण्डार छ जुन कार्य गर्न सकिन्छ। तपाईका सबै स्टाफहरू सि in्कमा हुन सक्छन् र प्रत्येक सम्भावना वा ग्राहकको मूल्य र ईतिहासको बारे पूर्ण ज्ञान हुन्छ। र ध्यान दिएर, त्यो ग्राहक संग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
एक महान सीआरएम कार्यान्वयनले एकदम थोरै एकीकरण र स्वचालनको लागि अनुमति दिनुपर्दछ, तिनीहरू पर्याप्त रूपमा उपयोगी छैनन् बक्स बाहिर तपाईंको CRM मार्केटिंग सामग्री तिनीहरूलाई बहाना हुन सक्छ।
यदि तपाईं सास सीआरएममा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो भविष्यमा टेक्नोलोजी अभिवृद्धि र बजेटको लागि ठूलो निर्भरता हुनको लागि तयार हुनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग त्यस्तो प्रणाली छ जुन किफायती स्केल हो, अन्य प्रणालीहरूको एक टनसँग एकीकृत गर्दछ, र निरन्तर उत्पादित प्रस्तावहरू र अधिग्रहणहरूको माध्यमबाट थप सुविधाहरू थप गर्दैछ।
एक रूप CRM कार्यान्वयन पार्टनर, कम हामी सीआरएम पूर्ण रूपमा एकीकृत, स्वचालित, र प्रयोग भएको देख्दछौं, टेक्नोलोजी लगानीमा कम प्रतिफल! एक सीआरएम तपाईको व्यवसायलाई अझ बढी सक्षम र प्रभावशाली बन्न मद्दतको लागि समाधान हुनुपर्दछ, कम होईन। यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक लागू गर्न प्लेटफर्म र पार्टनर छनौट गर्नुहोस्।
के बिक्री र मार्केटिंगलाई सीआरएम चाहिन्छ?
मा मान्छे नेटहन्ट सीआरएमले यो इन्फोग्राफिकको विकास गर्‍यो महामारी पछि उनको ग्राहकहरु को व्यवहार विश्लेषण पछि।
जबकि B2B बिक्री चक्र धेरै महिनासम्म लामो हुन सक्छ, यदि तपाईं आफ्नो सम्भावनालाई सही व्यवहार गर्नुहुन्न भने, उनीहरूले चुपचाप तपाईंलाई छोड्न सक्छन्। ग्राहक अधिग्रहणको जटिल प्रकृति छ र तपाईंको मार्केटिंग विभागले तपाईंको उत्पादनलाई परीक्षण ड्राइव गर्न नेतृत्व लिन तयार हुनु अघि धेरै कुराकानीहरूको आवश्यकता हुन सक्छ। अन्तमा, साँचो राजस्व दक्षता प्राप्त गर्न B2B का लागि बिक्री र मार्केटिंगको पigned्क्तिबद्ध कार्य आवश्यक छ। दुबैलाई पुल टेक्नोलोजी एकै पथमा हुन आवश्यक छ।
अन्ना पोज्नियाक, नेटहन्ट सीआरएम
तपाईंको CRM रणनीति विकास गर्न4सुझावहरू
मा मान्छे CrazyEgg यो इन्फोग्राफिकलाई तपाईंको CRM रणनीति योजना बनाउने ४ चरणहरूमा केही उत्कृष्ट सुझावहरू सहित राखेको छ... दृष्टि, विश्लेषण, जडान, र डाटा।
टैग: एक सीआरएमका फाइदाहरूcrazyeggसीआरएमcrm इन्फोग्राफिकcrm रणनीतिग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमुग्ध सीआरएमसंकेतएक crm के होजब crm मा लगानी गर्नेकिन crm महत्त्वपूर्ण छकिन एक crm प्रयोगकिन crm प्रयोग गर्ने
ठेगाना मानकीकरण 101: लाभहरू, विधिहरू, र सुझावहरू
तपाईको अमेजन बिक्री बढाउनको लागि तपाईले आज लिन सक्ने पाँच चरणहरू